आरडिटीपछि विश्वसनियता नभएको एन्टिजेन टेस्ट गर्दै सरकार :: विवेक राई :: Setopati
आरडिटीपछि विश्वसनियता नभएको एन्टिजेन टेस्ट गर्दै सरकार
विज्ञ भन्छन्- अर्को दुर्घटना निम्तिन सक्छ
कोरोनाभाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउन सरकारले एन्टिजेन परीक्षण गर्ने तयारी गरेपछि विज्ञहरूले त्यसको विश्वसनीयता नभएको भन्दै परीक्षण गर्न नहुने बताएका छन्।
एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा भाइरस समात्ने सम्भावना निकै कम हुने भन्दै विज्ञहरूले यसको प्रयोग गर्नु घातक हुन सक्ने औंल्याएका हुन्।
भाइरोलोजिष्ट डा. लुना भट्ट भन्छिन्, 'एन्टिजेन टेस्ट अरू भाइरसजस्तो यो भाइरसको परीक्षण गर्न विश्वसनीय मानिँदैन। यसले भाइरस पत्ता लगाउनलाई निश्चित विन्दुमा भएको एन्टिजेनलाई समात्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ। जसले गर्दा पोजेटिभ केसहरूलाई पनि नेगेटिभ देखाइदिन्छ।'
एन्टिजेन परीक्षणको 'सेन्सिटिभिटी' कम हुने भएकाले यसले पोजेटिभ संक्रमणलाई पनि नेगेटिभ देखाउने सम्भावना धेरै रहेको डा. भट्ट बताउँछिन्। महामारीका बेला यस्ता किसिमका परीक्षण गर्न नहुने उनको जिकिर छ।
'दुईटा पोजेटिभ केसहरू मात्र मिस भयो भने त्यसले त अरू धेरैलाई संक्रमण सार्छ। त्यसैले सस्तो र छिटो हुने नाममा महामारीका बेला यस्तो टेस्ट गर्नै हुँदैन,' उनले भनिन्, 'हामी यसको प्रयोग गरेर अर्को दुर्घटना निम्याउन खोज्दैछौं।'
उनले भारइसको प्रकृति अनुसार एन्टिजेन परीक्षण प्रभावकारी हुने बताइन्।
'एन्टिजेन टेस्ट काम नै नलाग्ने भन्ने हैन। हेपाटाइटिस पत्ता लगाउन एन्टिजेन नै प्रयोग गर्ने हो किनभने यसमा रगतमा धेरै एन्टिजेन सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ। जसले गर्दा सहजै समात्न सक्छ,' डा भट्टले भनिन्, 'तर कोरोनाभाइरसमा यसबाट संक्रमण पत्ता लगाउनलाई निश्चित विन्दुमा भएको एन्टिजेनलाई समात्नु पर्ने हुन्छ जुन यो टेस्टले समात्ने कम सम्भावना रहन्छ।'
उनले कोरोना पत्ता लगाउनलाई लिइने स्वाबमा भाइरसको लोड कम भएको स्थितिमा एन्टिजेन परीक्षणले भाइरसलाई नभेटाउन पनि सक्ने उल्लेख गरिन्।
त्यसैले पोजेटिभ केसहरूलाई पनि धेरै नेगेटिभ देखाउने सम्भावाना हुने उनी बताउँछिन्।
यसरी नेगेटिभ आएको नतिजालाई फेरि एकिन गर्न पिसिआर गर्नेपर्ने हुँदा दोहोरो झन्झट हुने डाक्टर भट्टको भनाइ छ।
'यसमा नेगेटिभ आयो भन्दैमा ढुक्क हुने स्थिति हुँदैन। पोजेटिभ केसलाई पनि नेगेटिभ देखाइदिने हुँदा एकिन गर्न फेरि पिसिआर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। बरू यसको अहिले प्रयोग नगर्नु नै उचित हुन्छ,' उनले भनिन्।
डा. भट्टले नेपालजस्तो स्वास्थ्य पूर्वाधारमा कमजोर रहेका देशले यस्तो टेस्ट प्रयोग गर्नै नहुने बताइन्। भोलि सानो गल्तीले गर्दा ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने स्थिति हुनुसक्ने भएकाले बेलैमा सचेत हुनु पर्ने उनको सुझाव छ।
'यस्तो टेस्ट एक दुई जनाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ तर महामारीका बेला हाम्रोजस्तो स्वास्थ्य पूर्वाधार नै कमजोर भएको देशले त प्रयोग गर्ने हुँदैन। भोलि अस्पतालमा लाइन बस्नुपर्ने स्थिति आयो भने स्थिति के होला? त्यसैले सस्तो र छिटो हुने नाममा यस्तो टेस्ट गर्नुहुन्न,' उनले भनिन्।
उनले अमेरिकामा पनि यस्तो टेस्टलाई आपतकालीन अवस्थाका लागि मात्र प्रयोग गर्न भनिएको उदाहरण पेस गर्दै भनिन्, 'त्यहाँको 'फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन' ले पनि आपतकालीन अवस्थामा मात्र एन्टिजेन प्रयोग गर्नु भनेको छ। सकेसम्म पिसिआर नै गर्नु भनेको छ।'
टेकु अस्पतालका संक्रमण रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले पनि पहिले गुणस्तर जाँच गरेर मात्र एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन्।
'यो टेस्ट सजिलो र सस्तो छ। फिल्डमै गएर पनि गर्न सकिन्छ तर पहिले यसको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुरा जाँच र अनुसन्धान गर्नुपर्छ,' उनले भने।
डा. पुनले गुणस्तर जाँच नगरी परीक्षण गर्दा आरडिटी परीक्षण गर्दा निम्तिएको हविगत फेरि दोहोरिने बताए।
उनले भने, 'गुणस्तर जाँच नगरी परीक्षण गर्दा पैसाको बर्बाद त हुन्छ नै साथसाथै हिजो प्रयोग गरिएको किटमा जुन समस्या देखियो त्यो दोहोरिन सक्छ।'
सरकारले सुरूमा पनि आरडिटी परीक्षणलाई प्राथमिकता दिँदा धेरै संक्रमणहरू समुदायस्तरमा पुगे। सुरूमा गुणस्तर जाँच गरेर मात्र प्रयोगमा ल्याउने भने पनि आरडिटी किटबाट व्यापक परीक्षण गरियो।
भारतीय सीमाबाट स्वदेश आउनेहरूमा आरडिटी बढी प्रयोग गरियो। जसले गर्दा धेरै पोजेटिभ संक्रमणलाई समात्न सकेन। पहिलो कुरा त उक्त आरडिटी किट संक्रमण पत्ता लगाउने खालको थिएन। बरू संक्रमण भएर निको भएकामा एन्टिबडी उत्पादन भयो वा भएन भनेर पत्ता लगाउनका लागि थियो।
सरकारले त्यसलाई धेरै ठाउँमा संक्रमण पत्ता लगाउनलाई नै प्रयोग गर्‍यो। यतिसम्म कि वीरगन्जको छपकैयास्थित एउटा मस्जिदमा रहेको एक समूहमा संक्रमण पुष्टि हुँदा उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको पनि आरडिटी परीक्षण गरियो। पछि फेरि पिसिआर परीक्षण गर्दा बस्तीका धेरैमा संक्रमण पुष्टि भयो।
त्यस्तै उदयपुरको भुल्केस्थित एक मस्जिदमा रहेका १६ जनामा सुरूमा आरडिटी परीक्षण गर्दा सबैको नेगेटिभ देखिएको थियो। पछि शंका लागेर पिसिआर परीक्षण गर्दा सबैमा संक्रमण पुष्टि भयो।
विज्ञहरूले सुरूदेखि नै आरडिटी परीक्षण नगर्न बारबार भनिरहँदा पनि सरकारले त्यसलाई वेवास्ता नै गर्‍यो।
पछि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आरडिटी किट संक्रमण पत्ता लगाउनका लागि प्रयोग गर्न नहुने भन्दै रिपोर्ट त निकाल्यो तर त्यतिन्जेल लाखभन्दा बढी किटको प्रयोग भइसकेको थियो। उक्त रिपोर्ट परिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुटुक्क बुझाएर बाहिर सार्वजनिक समेत गरेको छैन।
परिषद्ले त्यस्तो रिपोर्ट पेस गरे पनि मन्त्रालयले टेरेन। उल्टै थप आइडिटी किट खरिद गरेर परीक्षण अगाडि बढायो। पछि 'इनफ इज इनफ' समूहले अनसन बसेरै आरडिटी परीक्षण बन्द गर्न माग गरेपछि सरकारले अन्तमा आरडिटी बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो।
अहिले पनि विज्ञहरूले एन्टिजेन परीक्षण नगर्न चेतावनी दिइहरेका बेला सरकार भने यसबाट परीक्षण गर्न अगाडि बढेको छ।
मन्त्रालयले जापान सरकारबाट ६० हजार एन्टिजेन किट उपलब्ध हुने र सबै प्रयोगशालाहरूमा यसको प्रयोग गरिने जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले एन्टिजेन टेस्ट गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले समुदायहरूमा संक्रमण कुन अवस्थामा छ भनेर पत्ता लगाउन सेरोलोजिकल टेस्टको लागि एन्टिजेन परीक्षण गर्न लागिएको जनाए।
'बढी संक्रमण भएका ठाउँहरूमा संक्रमण कुन अवस्थामा छ भनेर एन्टिजेन परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको हो। मास स्क्रिनिङ गर्न चाँडो र सस्तो समेत हुने भएकाले यो परीक्षण गर्न लागिएको हो,' उनले भने।
डा. अधिकारीले जापानबाट अनुदानस्वरूप ७ हजार किट आइपुगेको र थप आउने क्रम रहेको जनाए। साथै अमेरिकाले पनि किट सहयोग गर्ने जनाएको उनले बताए।
नेपालले तत्काल आफैं किट खरिद नगर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सहप्रवक्ता अधिकारीले सुरूमा अनुदानमा आएका किटको प्रयोग गर्ने र त्यसको आधारमा आफैं खरिद गर्ने वा नगर्ने कुरा टुंगो लाग्ने बताए।
उनले पहिलेको आरडिटी किटभन्दा एन्टिजेन किट धेरै विश्वसनीय रहेको दाबी गरे। 'जापान, अमेरिकालगायत धेरै देशले यसको प्रयोग गरेको छ। हामीले प्रयोग गर्न लागिएको किट पनि युरोपियन युनियन स्टान्डर्डकै हो। हामी त्यहीमात्र प्रयोग गर्छौ,' डा. अधिकारीले भने, 'यो पिसिआर जतिको राम्रो त हुँदैन तर पहिलेको आरडिटी भन्दा धेरै राम्रो छ।'
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २३, २०७७, ०१:४७:००